ရခိုင်သဘောင်္သီးသုပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
မျှင်ငါးပိကောင်းကောင်း....၂ ဇွန်းခန်.( ထမင်းစား ဇွန်း)
ငရုတ်ကောင်း................၁ ဇွန်း (............။......)
ဆား+ ဟင်းခတ်မှုန်. ......သင့်ရုံ
ငရုတ်သီးစိမ်းတွေကို.လှော်ပြီး..ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဖုတ်ထားတဲ့မျှင်ငါးပိတွေနဲ.ရောထောင်းပါတယ်..။
သင်္ဘောသီးထဲကို..ထောင်းထားတဲ့အရော ၊ ဆား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်. ၊ မန်ကျည်း
Thanks & Respect Rakhine Foods Blog ...
copy from ပာင်းချက်နည်းများ face book
လတ်ဆတ်မှုမရှိ ရင့်ထော်နေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်သလို၊ အာဟာရဂုဏ်သတ္တိ တန်ဖိုးများ လည်း ပျက်ပြယ်သွားပြီမို့မည်သို့ ပင...